Fanadihadiana: Ahoana no mampitaha ny famokarana atiny? | Martech Zone
Talata, Jona 16, 2015 Talata, Jona 16, 2015 Douglas Karr
Mirifitra midina dia mandefa fanadihadiana amin'ny tsena mitohy momba ny fomba famokarana atiny. Na dia betsaka aza ny fikarohana azo ampahibemaso momba ny marketing amin'ny atiny iray manontolo, dia tsy dia misy fampahalalana manokana ho an'ireo matihanina amin'ny atiny hampiasaina hanombohana ny fomba famokarana, ny fizotrany, ny loharanom-pahalalan'ny mpiasa, ny andraikiny ary ny andraikiny ary ny teknolojia. Rundown dia hamoaka fanavaozana tsikera ireo angon-drakitra manan-danja mandritra ny taona.
Rundown dia namorona fanadihadiana fohy ho an'ireo matihanina amin'ny atiny ao amin'ny ekipa masoivoho, mpanonta ary ekipa votoatin'ny marika mba hanampy hanazava ny fomba fanaovana ny atiny. Mandritra ny fotoana maharitra, dia hampiasa angon-drakitra manerantany avy amin'ny mpanjifantsika ao Rundown ihany koa izahay mba hanomezana fahafantarana bebe kokoa ny fomba fandehanan'ny fikambanana avy amin'ny foto-kevitra mankany amin'ny atiny, ny fotoana maharitra hamokarana atiny, karazana atiny novokarina, ary teboka angona maro hafa mifandraika amin'izany .
Ny antony tokony handraisanao anjara: Ampitomboy ny mpihaino anao, mampitombo ny vola azonao.
Ireo tatitra vita sy ireo sary miaraka aminy dia ho fampahalalana mahasoa sy ilaina ary mahasarika ho an'ny mpamorona atiny rehetra. Ny mpandray anjara amin'ny fanadihadiana rehetra dia hahazo kopia maimaimpoana amin'ny tatitra feno, ao anatin'izany ny fahitana sy ny fikarohana momba ny loharano, ny andraikitra, ny andraikitra, ny haitao, ny fitaovana, ny fahombiazana, ny workflow ary maro hafa ho an'ireo ekipa atiny sy mpamorona atiny matihanina.
Raiso ny fanadihadiana momba ny famokarana atiny
Tags: benchmarkfizotran'ny atinyfamokarana atinyfomba famokarana atinyfamokarana atinybenchmark famokarana atinyfanadihadiana momba ny famokarana atinymatihanina atinyandraikitry ny atinyanjara toeranampiasa ao anaty atinyfanadihadiana atinyteknolojia atinymirifitra midina